‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि एकसाता अरुबाट अलग्गै बस्नु राम्रो’ | We Nepali
‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि एकसाता अरुबाट अलग्गै बस्नु राम्रो’
२०७७ वैशाख ९ गते १७:४६
डा. प्रमोदराज रेग्मी र डा. निर्मल अर्याल जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुवैजना अहिले बेलायतको बोर्नमाउथ विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँहरुसँग नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखाले सञ्चालन गरिरहेको कोरोनासम्बन्धी जनचेतना अभियानअन्तर्गत कोरोना भाइरसका विभिन्न पक्षमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः